China PSA Nitrogen Production gas plant Psa Nitrogen Generator Equipment Psa Nitrogen Machine ndị na-emepụta ihe na ndị na-enye ngwaahịa | Ma ọ bụ
Maka otu gas adsorbed ahụ (adsorbate) na adsorprtion ọ bụla, obere okpomọkụ, nrụgide dị elu na ikike adsorbing buru ibu
mgbe absorption na-adịgide adịgide; ma ọ bụghị ya, ọnọdụ dị elu karị, nrụgide dị ala na ikike ntakịrị adsorbing. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ anaghị agbanwe agbanwe, a na-akpọ ntụpọ na mkparịta ụka (mgbapụta mgbapụta) ma ọ bụ nrụgide nkịtị ka ọ bụrụ ihe mgbaghari adsorption mgbatị (PSA) ma ọ bụrụ na adsorption n'okpuru mkpakọ.
Dị ka e gosiri n'elu, nha nke adsorption nke oxygen na nitrogen site carbon molekụla myọ dịgasị ukwuu. A pụrụ ikewapụta nitrogen na oxygen n'ihi ọdịiche nha nke ikuku oxygen na nitrogen adsorption sitere na ikuku n'okpuru nrụgide ụfọdụ. Mgbe nrụgide ahụ na-ebili, carbon molekụla sieve adsorbs oxygen na site na nitrogen; mgbe nrụgide ahụ dara, sieve na-achọ ikuku oxygen ma na-agbanwe nitrogen. Na -emekarị, PSA generator bu nke abụọ nwere adsorbers abụọ, otu n’ime ha na-ekunye ikuku oxygen ma na-ewepụta nitrogen, nke ọzọ na-achọ oxygen ma na-eweghachi nitrogen. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta nitrogen mgbe niile.
1. Akụrụngwa na-arụ ọrụ ọrụ na-enweghị ike nrụgide na-arụ ọrụ ruo mgbe a ga-ebelata oriri nke ikuku abịara ozugbo.
2.Ae nwere ike ịhọrọ sieve nke na-azọpụta ike dị ka ọnọdụ ndị ahịa si dị.
3. Advanced ibu na-agbanwe agbanwe technology ka n'ihu belata ike oriri.
4. Advanced mbukota technology ime carbon molekụla myọ ọzọ kọmpat na edo na-ebelata esemokwu ọnụọgụ.
5. Kasị pụrụ ịdabere na gas ọkọnọ ọgwụgwọ iji hụ adsorption arụmọrụ na ọrụ ndụ nke sieve.
6. Switchover valves na mmiri nke ama ụdị n'ọrụ iji hụ ngwaahịa mma.
7. Advanced technology akpaka cylinder compaction.
8. Enwere ike nyochaa akụrụngwa na ezigbo oge.
9. Enweghi ike inweta nitrogen nwere ike ọpụtaghị n’onwe ya.
10. Enyi na enyi HMI.
Nke gara aga: Industrial PSA nitrogen na-amụba osisi maka ire Nitrogen gas Ime igwe
Osote: Igwe nkpuchi nitrogen eji eri nri maka ulo ahia nri Nri nitrogen Generator
Ngwa Psa Nitrogen Generator
Igwe Igwe Nitrogen
Uru Uru 1: designkpụrụ atụmatụ nke osisi a bụ iji hụ nchekwa, nchekwa ike na ọrụ dị mfe na ndozi. Teknụzụ na-eduga n'ọkwá n'ụwa. Azịza: Asịwo chọrọ nza nke mmiri mmiri mmepụta, n'ihi ya, anyị na-enye n'etiti mgbali ikuku egweri usoro ịzọpụta itinye ego na ike oriri ....